पोर्चुगल जान कति खर्च लाक्छ होला ? नेपालीको लागि राम्रो छ कि छैन ?
Tue, Mar 20, 2018 | 08:04:05 NST
प्रश्नः पोर्चुगल जान कति खर्च लाक्छ होला ? नेपालीको लागि राम्रो छ कि छैन ?
उत्तरः मोहन अधिकारी, निर्देशक वैदेशिक रोजगार विभाग - पोर्चुगल वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले खुल्ला गरेको देश हो। रोजगारीका लागि पोर्चुगल कामदार पठाउँदा सरकारले तोकेको लागत ८० हजार रुपैयाँ हो। यहाँ जानको लागि आधिकारीक म्यानपावर कम्पनी त्यसले ल्याएको डिमान्ड सहि छ कि छैन त्यो राम्रोसँग बुझेर मात्रै जान म सल्लाह दिन्छु।